West Taiwan (6Days)KH - FF - 5100 B
ထိုင်ဝမ်ကို မိသားစု နှင့်သီးသန့်သော်လည်းကောင်း၊သူငယ်ချင်းများဖြင့်အေးအေးလူလူသွားချင်သူများအတွက်။
Day : 1 Yangon – TaiPei (light Lunch On flight ,Dinner)
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာကာ Taiwan Taoyuan International Airport သို့ရောက်ရှိပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြော Taiwan ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပါမည်။ ပြီးလျှင် ညစာသုံးဆောင်ကာ ညဈေးတွင်လည်ပတ်ပြီး ဟိုတယ်တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :2Taipei-Tao Yuan (Breakfast, Lunch, Dinner)
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာကာ Taiwan Taoyuan International Airportသို့ရောက်ရှိပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြော Taiwanဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာKaohsiungCityတွင်ရှိသောမဟာယနဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သော FGS Buddha Museum သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ထို့နောက်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့အလွန်ကောင်းသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သော Dragon Tiger Tower သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။နာမည်ကျေယ်ကြားလှသော Kaosiung Night Marketတွင်ဈေးဝယ်ထွက်ကြပါမည်။ညစာကို ShabuShabu ဖြင့် local restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်Hotel တွင် တစ်ညတာ အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :3Ocean World- Alishan Train-Yuyupas Aboriging Village (breakfast,Lunch,Dinner)
ဟိုတယ်တွင်မနက်စာသုံးဆောင်ပြိးနောက်design ဆန်းဆန်းများဖြင့်အမျိုးအစားစုံလင်စွာခင်းကျဉ်းပြသထားသော Diamond Exhibitionသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ထိုမှတစ်ဖန် ရေအောက်ရောက်နေသကဲ့သို့ ခံစားရပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ အလွန်ကောင်းသော Ocean World 3D painting Village သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။Alishan Train စီး၍ရှု့မျော်ခင်းတစ်လျောက်ငေးမော လိုက်ပါခံစားရင်း YuYuPas Aborigine Village သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ညစာကို Aborigine ရိုးရာ အစားအသောက်ဖြင့် တည်းခင်းဧည့်ခံပြီး Hotel တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :4SunMoon Lake - Chen Tai Temple- Tai Chung Night Market(Breakfast,Lunch,Dinner)
Hotelတွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး နောက် Sun Moon ရေကန်သို့သွားရောက်ရ်ူအပျော်စီးလှေစီးကာရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ရှုခင်းများကိုကြည့်ရှု့ခံစားပြီးနောက်အနီးတွင်ရှိသောChenTaiTempleသို့သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။နာမည်ကျော်ကြားလှသောTai Chung Night Market တွင်သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ညနေစာကို Local restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြိးနောက် Hotel တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :5Taipei-Yeliu-Jiu fen-Shifen –Pinghsi- Taipei 101(Breakfast,Lunch,Dinner)
Hotelတွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်Taipeiမြို့၏အထင်ကရနေ၇ာတစ်ခုဖြစ်သောရေတိုက်စားမှု့ကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာသောဘုရင်မဦးခေါင်းကျောက်ဆောင်(Queen’sHead)နှင့်မှိုပွင့်သဏန်ဖြစ်ပေါ်နေသောကျောက်ဆောင်များရှိရာYehliuGeoparkသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ပြီးလျှင်တောင်ပေါ်မြို့လေးဖြစ်သောJiuFenမြို့လေးသို့သွား ရောက်လည်ပတ်ပါမည်။နာမည်ကျော်ကြားလှသောShifenရေတံခွန်သို့လည်းလိုက်ပို့ပေးပြီးအပြန်တွင်Pinghsi ရထားလမ်း ဘက်မှ Taipei သို့ ပြန်လာပါမည်။တိုင်ပေမြို့၏မိုးမျှော်အဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်သောTaiPei 101Tower သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး တိုင်ပေမြို့360ံရှု့ခင်းကို ကြည့်ရှု့ခံစားရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပါမည်။ ညနေစာကို Local restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြိးနောက် Hotel တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :6Taipei- Chinang Kai Shek Memorial Hall (Breakfast,Lunch,Dinner)
Hotelတွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်မျ check out လုပ်ကာ မနက်ပိုင်းတွင် Duty Free ဆိုင်များ Souvenir shopများ တွင် ဈေးဝယ်ထွက်ပြိးနောက်အမျိုးသားရေး အထိမ်းအမျတ်အဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်သော Chinang Kai Shek Memorial Hall သို့ သွားေ၇ာက်လည်ပတ်ကာ Group photo များရိုက်ပြီးနောက်လေဆိပ်သို့ဆင်းကာ ရန်ကုန်သို့ပြန်ပါမည်။
1.	3 Star Hotel accommodation for 4night with twin sharing basis
2.	Meals as per itinerary
3.	Transportation as mention in the itinerary
5.	Entrance & Zone fees as in itinerary
6.	Visa fees & applicatons fees